Ikike Ikike dị iche iche na-akpata Ọnwụ Isi? | Etu Ntutu Eke & Ntutu isi
Echiche orgha Ka Ọ̀ Bụ Eziokwu? Fọdụ na-ekwu na ọ bụ isi ihe kpatara isi nkwọcha. Mana n'eziokwu, iyi okpu kachasị amasị gị, ọbụlagodi abụghị isi ihe kpatara ị ga - eji nwe ntutu isi. Dabere na ndị dọkịta na ndị ọkachamara na ntutu isi, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị na-enwe ntutu isi bụ nke a na-ejikọta kpọmkwem na hormone nke dị na anụ ahụ a na-akpọ DHT nke na-awakpo ntutu isi.
Nchegbu: Ihe kpatara ntutu dị nro
Ihe egwu dị na ọgwụgwọ Ọgwụ Ọnwụ
5 na-egosi na ị na-aga na agba
Yoga Na-eme Nke Na-akwalite Uwe Ntutu
Nwere ike 15, 2019 MICHAEL KHOURY
Ụzọ aghụghọ na-emebi emebi
Nwere ike 13, 2019 MICHAEL KHOURY
5a-reductase Mgbochi DHT & Na-eweghasị Ọcha Ntutu
Nri Ọjọọ Na - eme Ka Nto Na - adịghị Mma
Ejila ọgwụ ọjọọ eme ihe maka ịgwọ ọrịa ọdịda
Ọkpụkpụ akpụkpọ ụkwụ na-eme ka ọ dịkwuo ntụgharị ihu
Achachala Ntutu Uhie Gị kwa ụbọchị
Chemicals na Mmiri Na-emetụta Ọganihu Ntutu
Top 10 Atụmatụ iji Kwụsị Nda isi
A Naghị eme Ụlọ Elu Eke
Echiche Ụgha na Nzuzo Ụmụaka
Otú I Kwesịrị Isi Na-asacha Ntutu Gị
Nwere ike 31, 2018
Nzuzo na ezi ntutu na ahụ ike dị mma
Nwere ike 31, 2018 MICHAEL KHOURY
Ụzọ kachasị mma ị ga-esi na-eto gị
Echiche orgha Ka Ọ̀ Bụ Eziokwu?
Fọdụ na-ekwu na ọ bụ isi ihe kpatara isi nkwọcha. Mana n'eziokwu, iyi okpu kachasị amasị gị, ọbụlagodi abụghị isi ihe kpatara ị ga - eji nwe ntutu isi.
Dabere na ndị dọkịta na ndị ọkachamara ntutu isi, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị na-enwe ntutu isi na-ekekọta njikọta na hormone nke dị na ya DHT nke na - ebuso ntutu isi n’isi. A na-akpọ nke a androgenetic alopecia (ntutu na-akpata site na mkpụrụ ndụ ihe nketa) na ọ na-emetụta ihe dị ka 30 ruo 50% nke ndị mmadụ n'otu afọ 50.
Agbanyeghị, nke a apụtaghị na enweghị ihe ndị ọzọ na-eso akpata ajị ihu na ajị isi. Ọtụtụ ihe dịka mgbanwe mgbanwe homonụ, ọnọdụ ahụike, ọgwụ, nrụgide, ụdị ntutu yana ọgwụgwọ niile nwere ike rụọ ọrụ na-emebi ntutu gị.
Ugbu a laghachi n'ajụjụ a: Họọ na-akpata ntutu isi?
Azịza doro anya na nke dị mkpirikpi bụ mba. Ma ikpu okpu kpuchie gi isi nke oma ogologo oge nwere ike igbochi obara obara n’isi ya n’ikpe n’azu ya. Na TCM (Nkà mmụta sayensị Chinese) A na-ahụta ntutu dị ka mgbakwunye nke ọbara na ọbara na-erugharị mgbe niile n’akpụ isi ya dị mkpa maka itolite ntutu dị mma.
Otu nsogbu nke okpu nwere ike iweta bụ mkpocha ọsụsọ na aji nke nwere ike ịbawanye sebum, dandruff ma nwee ike ikwe ka nje bacteria dịkwuo mfe nke nwere ike ibute uto ntutu isi. Ọ bụ nke a mere o ji dị mkpa ka ị ghara iyi okpu ogologo ụbọchị niile, ma kwe ka isi gị kute ume na ọkụ ọkụ ụfọdụ nke egosipụtara na ọ na - enyere aka na ntutu isi.
Ohere nke Traction Alopecia
Ihe ọzọ dị mkpa mgbe ị na-eyi okpu bụ ohere nke ịbịpụta alopecia, nke bụ ntutu isi na-akpata site na mgbe niile ịdọpụ ntutu. Iji maa atụ, ụfọdụ ụdị ntutu nke gụnyere ntutu isi na braids na ponytails na-akpata oke nrụgide na ike a nwere ike ibute ntutu isi nwayọ. Ọ bụrụ n’ịchọta ntutu gị mgbe niile na okpu ya, ọ nwere ike imebi ihe ma na-emetụta uto ntutu gị.
Uru nke Sun maka ntutu gị
Anyanwụ na-enye ahụ gị ohere ịmịpụta vitamin D nke n’enye aka n’uba n’uba nke ntutu ma na - egbochikwa ntutu isi. Logistsfọdụ ndị na-ahụ maka mmiri ọgwụ na-atụ aro na Vitamin D bụ ọgwụgwọ maka ọtụtụ nsogbu ahụ ike. Agbanyeghị, kpachapụrụ anya n ’ihu igwe ga-emebi akpụkpọ gị, kpatara anwụ ma mebie ntutu isi.
Kootu nwere ike ghara ịbụ isi ihe kpatara ị na - ejighi ntutu, mana otu ihe doro anya bụ na ha agaghị enyere aka ma ọ bụrụ na ị na - eyi ha mgbe niile na ị na - aatingụbiga mmanya ókè. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-enwe mmasị iyi okpu maka ụdị, igbochi anwụ ụbọchị ọ bụla ma ọ bụ n'ihi na ịchọrọ ịzobe ntutu isi gị dị ugbu a, tụlee iwepu okpu ahụ kwa elekere ma ọ bụ karịa maka minit 10 ma ọ bụ 15 naanị iji kwe ka isi gị na-eku ume na asat. Ebe ọ bụ na okpu okpu nwere ike igbochi mgbasa ọbara, ihe dị mkpa ime bụ ịhịa aka n'ahụ gị iji bulie uto ntutu kwa ụbọchị.
ka okpu na-akpata ntutu?ntutu isiokpuokpu na-akpata ntutu isiakụkọ ifo ma ọ bụ eziokwu banyere ntutu isi